Content | ZAYYA
* အိမ်တစ်လုံး ( အက်ဆေး )
* ရှေးယခင် စိန်စားသတင်း
* အစိုးမရခြင်းကိုတဲ့လေ အနတ္တဟုခေါ်သတဲ့
* လွမ်းလွန်း ပင်ရိပ်
* ကွန်တီနမ်တဲလ် ဒဿနပညာ (၆)
* ကျောင်းတော်ရာသို့ ခြေလှမ်းကိုးဆယ်
* တိမ်မရှိတဲ့ညနေဆိုတာ ဘာမှကို မရှိတာ။
* My Favorite Prose:Tao Teh Ching verse no-81
* ပြာမှုန်စများ သီဝရီ
* Machiavelli:The Prince -Chapter I,II,III
* တဏှာမပါသော မေတ္တာရေကြည်သည်သာ
* ကွန်တီနမ်တဲလ်ဒဿနပညာ ( ၅ )
* မေး၍ ဖြေမိပါသည်။ 😀
• ထိန်းကျောင်းမှု အကျင့်အကြံတရား
• – ပျောက်ဆုံးခြင်း
• ပစ်ပယ်ခံလာရသော ဆင်ခြင်ခြင်းတရားနှင့် ဟေဂယ်လ်
• Different Way of Using the Mind
• ငါမရှိတဲ့ညရဲ့ အဖြေ
• The Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism
• ကွန်တီနမ်တဲလ်ဒဿနပညာ ( ၂ )
• Five Agents of Change
• Yangon Happy New Year 2011 တောလား
• Insider Attack and Cyber Security
• ရွက်လွှင့်သွားသော ပုလွေသံ အက်ကြောင်းများ
• Some Mathmatics Notes and PDF files
• Words and Behavior
• Memoir to Ramanujan
• Some Firefox Addon
• Drupal! Drupal! Drupal!
• အခွံများနှင့် လူ
• Excellent WordPress Security Tips & Plugins
• ဘယ် OS ကို Log in ဝင်ချင်ပါသလဲ
• On Being with Others
• Moon over the Mountain
• My Master, the One I want to be
• Death and Philosophy
• သုည-ပါ ကန့်လန့်ကာ ချပါသည်။
• Dead Soldiers ( ခေတ်သစ်ရင်ခုန်သံ )
• Some journalists stand up for WikiLeaks
• Hacker Underground Handbook
• ဧဝံမေသုတံ ( ကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ )
• စံလွဲစရိုက်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု
• Hacking RSS and Atom
• မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ ဘာဝနာ
• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငေးကြည့်ခြင်း
• Myanmar Political Culture and Third Wave of Democratization
• မိသားစုလား -ရုံးလား – လစာကိစ္စ စိတ်မဝင်စားပါ။
• ဆရာပြောသော ကဗျာ့သဘော
• လောကဓာတ်သည် သုညတ မှ ပေါက်ဖွားသလော
• မိုးစွေခဲ့သော တစ်ခါက နွေနှောင်းည
• မခြယ်ပါနှင့် – လှပါသည်။
• Burma and Buddhism by Bogyoke Aung San
• ရေလုပ်သား စကားကထာ
• ဟက်ကာတို့ အထုပ္ပတ္တိ
• ပုဒ်မ ၃၀၇ အတွေးစများ
• ဆရာမိုးဟိန်း(သားဂျာနယ်ကျော်)၏ သံဝေဂ အမှာစကား
• ကောင်းလှချည်လားတဲ့ ဒီလူ့ဘဝ
• သခင်အောင်ဆန်း၏ လက်ရာ၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်
• Computer စာအုပ်လေးနည်းနည်း 😀
• ခေါင်းဆောင်ကောင်းနှင့် စိတ်အခံ
• ဒီနေ့ ကြိုက်မိတဲ့ကဗျာလေး
• မခင်နှင်းဆီ နှင့် စီးကရက်
• ဖော်မဲ့ အက်ဆေး
• The Nature of Time and Space ( preface )
• စာအုပ်နည်းနည်း ဖီးလ်ကျဲကျဲနှင့်
• သိစိတ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်
• ထူးမိပါသလား ရတနာပုံ
• The still Mind
• Embodying the Tao : 1st verse of Tao Teh Ching
• ဘေဘီ စကြာဝဠာ
• ဆာ့ခ်ျ၏ ဆင်းရဲမှုနိဂုံး
• ဗီယက်နမ်ရောက် တာအိုဝါဒ
• အုက္ကန်ရဲ့ ဘရိတ်ဓါး
Archives Select Month January 2015 (2) November 2013 (1) September 2012 (3) August 2012 (27) July 2012 (7) June 2012 (12) May 2012 (15) April 2012 (33) March 2012 (8) February 2012 (23) January 2012 (10) December 2011 (29) November 2011 (43) October 2011 (21) September 2011 (1) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (27) May 2011 (31) April 2011 (18) March 2011 (9) February 2011 (25) January 2011 (29) December 2010 (35) November 2010 (20) October 2010 (13) March 2010 (2) February 2010 (2) December 2009 (12)
Categories Select Category AungSan (29) eBook (19) mood (173) Opinion (57) Osho (172) Photo Essay (5) philosophy (77) Krishnamurti (10) poem (49) science (42) maths (10) Physics (6) Techno (12) wisdom (111) Death (2) Economic (1) essay (5) essay (2) Literature (4) physics (1) Politics (9)
Letters from Osho ~ 5
answer aung san beauty being bogyoke Buddha buddhism Burma death dhamma download education Einstein essay fear feature feel freedom future god Heaven independence India japan LaoTzu Lao Tzu life literature Logic love man maths meditation mind monk mood moon moral myanmar nature news now opinion Osho past philosophy physics poem politics present problem psychology question religion science social Tao Thakhin theory thinking truth university war wisdom word words world yangon zen ကဗျာ ဂီတ ဓမ္မ ပါရဂူ ဘာဝနာ အိုရှိုး